Ahoana no ahitanao fitomboan'ny fivoaran'ny Google Analytics?
Google Analytics dia iray amin'ireo fitaovam-pahaizana matihanina matihanina izay manome maimaim-poana ny angon-drakitra rehetra momba ny tranonkala sy ny toerana ao SERP. Manome fahafahana hanara-maso ny fahombiazan'ny fampielezan-tsarimihetsika fikarohana izy io ary hanatsoaka hevitra mifanaraka amin'ny vaovao azo. Fahasoa iray hafa azo raisina amin'ny rindrambaiko Google Analytics dia ny fahafahana manara-maso ny tranonkala backlinks. Ao amin'ny rohy ivelany GA dia antsoina hoe referrals. Izany no antony ilanao ny mikaroka ao amin'ny tatitra mampitolagaga anao.
Ity lahatsoratra ity dia natokana ho an'ny fampahalalana ny fomba ahitanao ny rohy mankany amin'ny Google Analytics sy ny fomba hanavahana azy amin'ny kalitao sy ny loharano - liberty slots mobile casino instant play. Dia, izao no mandeha.
Dingana mba hijerena sy hanamarina ny rindran-kaonty ao amin'ny Google Analytics
Misafidy ny profilofoto Google
Ny fiaraha-miasa amin'ny GA, tokony ho azo antoka fa ampiasainao ny kaonty, profile, ary fomba fijerinao, raha toa ianao ka manana maromaro ety sy tetikasa maro samihafa izay mety hiteraka korontana marina. Ny tranonkala misy anao amin'izao fotoana izao dia hapetraka eo an-tanana ankavanan'ny pejy. Mila mametaka azy ianao ary mifidiana ny iray amin'izany.
Tatitra momba ny famerenana
. Ireo dingana manaraka ireo dia hanampy anao handefa ny tatitra momba ny backlinks araka ny tokony ho izy:
Tsindrio ny "Acquisition" ao amin'ny menan'ny havia mba hanamarinana ny tatitra rehetra momba ny famerenana;
Fidio ny "Fandrosoana rehetra";
Tsindrio ny bokotra "Referrals".
Ny loharanom-pizaran-trondro azo tsidihana dia azo jerena ao amin'ny fizarana Google Analytics izay antsoina hoe " Referral Report. "Eto ianao dia hahita ny angon-drakitra takiana momba ny backlinks sy ny loharano misy anao.
Teknolojia mahomby amin'ny fanamarinana rindran-damina ao amin'ny GA
Misy teknika avo lenta azonao ampiasaina hamakiana ireo rakitsoratra backlink ao GA.
Ampio sehatra vaovao hafa
Mba hampielezana ny fikarohana momba ny backlinks ary hahazo fampahalalana marim-pototra,. Ity teknolojia Google Analytics ity dia hanampy anao handrava ireo karazana mpitsidika isan-karazany manatona ny tranokalanao amin'ny alalan'ny backlinks.
Manaraka ny dingan-drakitrao manaraka ireto:
Tsindrio ny bokotra "Add Segments";
Ampiasao ny boaty;
Tsindrio avy eo ny bokotra "ampiharina" mba hanamafisana;
Taorian'izany, dia ho hitanao ny isan-jaton'ny sangan'asan'ny segondra vaovao sy ny angona azo oharina.
Mba hijery loharano bakalorea dia azonao ampiasaina ny " "Asa ao amin'ny GA. Ny loharano voalohany dia loharano. Ao amin'io tabilao io dia azonao atao ny mijery ireo dom-pifandraisana mivadika. Mba hahitana ny pejy bakilika, mila mametaka amin'ny iray amin'ireo sehatra ianao. Raha manao izany ianao, dia ho afaka hahita ny làlana fanondroana ny rohy ivelany.
Taorian'ny fanamarinana loharanom-pejy rehetra azo jerena dia azonao atao ihany koa ny mijery ny takelaka fidirana azonao jerena. Azonao atao izany, manaraka ireto dingana ireto:
Tsindrio ny "Landing Page";
Avy eo dia voamarikao ireo pejy mitoraka anarana;
Jereo ny angona, ny fitondran-tena, ary ny angona fanovana; (azonao atao ny manamarina ireny angon-drakitra misongadina ambony ireny).